Iibin Cabsan | Martech Zone
Iibin cabsi leh
Arbacada, Juun 19, 2019 Arbacada, Juun 19, 2019 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan la fadhiistay milkiile ganacsi oo aan ka soo shaqeeyay dhowr mashruuc. Isagu waa qof karti badan isla markaana leh ganacsi sii kordhaya oo si fiican u socda. Maaddaama uu yahay ganacsade yar yar, wuxuu ku xujeeyay inuu si taxaddar leh isugu dheellitiro kalandarka iyo miisaaniyadda.
Wuxuu lahaa hawlgelin weyn oo lala qorsheeyay macmiil cusub oo lama filaan ah inuu dib u dhigo. Waxay gelisay caafimaadka maaliyadeed ee shirkadiisa khatar sababtoo ah wuxuu sameyn lahaa xoogaa maalgelin ah qalabka lagama maarmaanka u ah shaqada. Weligiis kuma fikirin inuu ku dhegi doono… dakhli la'aan uun, laakiin lacag-bixinta qalabka fooda inagu soo haya.
Dhowr usbuuc ka hor, kamaan warqabin dhibaatadiisa. Wuxuu weydiin lahaa taladeyda ku saabsan bartiisa maxaa yeelay sifiican uma badalin waana ku dhex socday MUDDADA jimicsi. Wuxuu ka shaqeeyey nuxurka wuxuuna doonayey inuu soo saaro hordhac muuqaal gaaban ah sidoo kale.
Markii aan la socday toddobaadkan, wuu ka hadlay xaaladiisa. Waxaan weydiiyay waxa uu ka qabanayo arintaas. Wuxuu sheegay inuu ka shaqeynayay goobta, oo uu ka shaqeynayay fiidiyoow, isla markaana uu ka shaqeynayay olole emayl ah macaamiishiisa.
U wac iyaga
Waxaan weydiiyay, "Ma u yeedhay macaamiishaada?".
"Maya, waan raacayaa ka dib markaan diro ololahan emayl.", Ayuu ku jawaabay.
"Wac haddaba.", Waan ku jawaabay.
“Runtii? Maxaan idhaahdaa? ”, Ayuu waydiiyay… isagoo ka walwalsan baaqa buluugga ah.
Runta u sheeg. U wac iyaga, u sheeg iyaga inaad ku jirto farqi jadwalkaaga macaamil aan filayn oo ka tagaya. Ogeysii inaad ku riyaaqday inaad kala shaqeysid howlihii hore iyo inay jiraan fursado yar oo aad aragto inaad lashaqeyn karto. Weydiiso in ay kulan shakhsi ah uga wada hadlaan fursadahaas. ”
"Waxaan isku diyaarinayaa kulan halkaan saac kadib, waan soo wici doonaa intaas kadib."
“Meheraddaadu dhibaato ayay ku jirtaa oo cudurdaar ayaad u samaynaysaa. Waad wici kartaa hal wicitaan hada kahor kulankaaga. Waad ogtahay anna waan ogahay. ”
"Waan baqayaa," ayuu yidhi.
“Waxaad ka cabsaneysaa taleefan aanad soo wicin iyadoo meheraddaadu khatar ku jirto?” Ayaan weydiiyay.
“Waayahay. Waan sameynayaa. ”
Qiyaastii 20 daqiiqo kadib, waxaan u diray fariin si aan u arko sida uu wicitaanku u dhacay. Wuu faraxsanaa… wuxuu wacay macmiilka waxayna u furnaayeen fursad ay markale ku wada shaqeeyaan. Waxay ku qabteen kulan dabagal ah xafiiskiisa toddobaadkan.
Sida saaxiibkey kor ku xusan, waxaan ku kalsoonahay awooddeyda si aan u caawiyo macaamiishayda laakiin iibka iyo geedi socodka gorgortanku wali waa wax aanan ka helin… laakiin waan sameeyaa.
Sanado kahor, my tababaraha iibka, Matt Nettleton, ayaa i baray cashar adag. Wuxuu iga dhigay inaan telefoonka hortiisa ka qaado oo aan weydiiyo rajo ganacsi. Waxaan ka helay qandaraas ballaadhan wicitaankaas oo cirka isku shareeray my shirkadda latalinta suuq geynta.
Waxaan jeclahay warbaahinta dhijitaalka ah… waxyaabaha ay ka kooban tahay, emaylka, warbaahinta bulshada, fiidiyaha, xayeysiinta… dhammaantood waxay leeyihiin soo laabasho weyn maalgashiga berri. Laakiin heshiis kuma xidhayo maanta. Waxaad awoodi kartaa inaad ku iibiso waxyaabo badan oo widget ah, tikidhada, iyo heshiisyo kale oo yar iyada oo loo marayo warbaahinta dhijitaalka ah. Laakiin haddii ganacsigaagu uusan shaqsi ahaan ku xirneyn rajada taleefanka ama shaqsi ahaan, ma xiri doontid heshiisyada ganacsi ee waaweyn ee ganacsigaagu u baahan yahay.
Dhowr bilood ka hor, waxaan ku jiray xaalad la mid ah. Waxaan haystay macmiil weyn oo igu wargeliyay inay lumiyeen maalgelintii, waxaana qasab nagu ahayd inaan miisaaniyadda si weyn u yareynno. Kuma jirin wax dhibaato dhaqaale ah… waxaana haystay liis shirkado ah oo kol hore ila soo xiriiray oo caawimaad raadinaya. Laakiin macaamiisha cusubi way adag yihiin inay kor u kacaan, way adag yihiin inay xiriir la yeeshaan mana laha soo-celinta ugu wanaagsan ee maalgashiga. Helitaanka macmiil cusub ma ahayn wax aan sugayay.
Beddel ahaan, waxaan la kulmay mid kasta oo ka mid ah macaamiishayda hadda waxaanan daacad ka ahaa farqiga dakhliga ee aan rajaynayay in aan dhammaystiro. Toddobaadka dhexdiisa waxaan dib ugala xaajooday qandaraas macmiil muhiim ah waxaanan dalab labaad ka helay macmiil kale si aan u ballaariyo hawlgelinta. Waxa kaliya ee ay qaadatay waxay ahayd aniga inaan shaqsiyan kula xiriiro, una ogeysiiyo xaalada, iyo inaan miiska la saaro miiska iyaga.
Ma ahayn emayl, muuqaal, casriyeyn bulsho, ama xayeysiis. Waxay qaadatay wicitaan taleefan ama kulan midba midka kale si ay u dhacdo.
Seddex shaqo joojin… Next
Hal dabagal oo tan ah. Waxaad u baahan tahay inaad ka taxaddarto inaad waqtigaaga oo dhan geliso himilo aan weligeed xirmin. Waqti aan xadidneyn ayaad ku bixin kartaa iibka aan soo saarin.
Haddii aad xiriir shaqsiyeed la leedahay macmiilka ama rajada - xitaa way ka sii xumaan kartaa. Way ku jecel yihiin waxayna rabaan inay ganacsi kula yeeshaan, laakiin ma awoodi karaan. Waxay noqon kartaa waqti, miisaaniyad, ama sababo kale oo badan. Aad ayey aad ugu fiican yihiin inay ku ogeysiiyaan inaysan dhici doonin. Waxa ugu dambeeya ee aad dooneysid inaad sameyso ayaa ah inaad iyaga jeceshahay oo aad qatar geliso xiriirka.
Saaxiibkeyga wanaagsan ee sameeya iibinta ganacsiga ayaa ii sheegay inuu haysto seddex shaqo joojin. Wuu soo wici doonaa ama la kulmi doonaa rajo, wuxuu tilmaami doonaa inay jirto baahi, wuxuuna soo jeedin doonaa xalka. Kadibna wuxuu sameeyaa seddex taabasho shaqsiyeed si uu isugu dayo inuu midkood “No” u gaaro. ama xiro heshiiska.
Haddii aysan xirmin, wuxuu ku wargeliyaa inuu sii socdo oo way wici karaan haddii ama markii ay baahi jirto. Isagu aakhirka wuu soo laaban doonaa oo dabagal ayaa lagu sameyn doonaa, laakiin haddii aysan xirmin dhowr kulan gudahood, diyaar uma ahan inay ganacsi la sameeyaan… maanta.
Hadaad ubaahantahay ganacsi hada, waxaad ubaahantahay inaad sameyso wicitaanka hada.
Istaraatijiyadaha Shaqeyn kara ee Wada Xiriirka Omni-Channel
Qaabka89: Suuq-geynta Software-ka AI ee Xayeysiintaada Dijital ah